Tsy mila fampiharana hampiasa Omegle amin'ny telefaona na takelakao ianao!Ny tranonkala dia miasa tsara amin'ny finday.
Hihaona amin'ny vahiny miaraka amin'ny tombontsoanao!
Omegle(oh meg ull)dia fomba tsara hihaonana namana vaovao, na dia manao fanazaran-tena ara-tsosialy aza.Rehefa mampiasa Omegle ianao dia ampiarahina amin'ny olon-kafa mba hiresaka tsirairay.Raha tianao dia azonao atao ny manampy ny zavatra mahaliana anao ary ianao dia hiaraka amin'ny olona iray izay nisafidy ny sasany amin'ireo mahaliana anao.
Mba hanampiana anao hijanona ho voaro, ny chat dia tsy mitonona anarana raha tsy milaza amin'olona ianao hoe iza ianao (tsy soso-kevitra!), ary azonao atao ny mampiato ny resaka amin'ny fotoana rehetra.Jereo ny fepetran'ny serivisy sy ny torolalan'ny vondrom-piarahamonina raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny tokony hatao sy tsy tokony hatao amin'ny fampiasana Omegle.Omegle vidéo chat dia tony fa tsy misy antonony tonga lafatra.Ny mpampiasa dia tompon'andraikitra irery amin'ny fitondran-tenany rehefa mampiasa Omegle.
Tokony ho 18+ na 13+ ianao raha mahazo alalana sy fanaraha-maso avy amin'ny ray aman-dreny vao afaka mampiasa Omegle.Jereo ny fepetran'ny serivisy Omegle raha mila fanazavana fanampiny.Ny fiarovana amin'ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny izay mety hanampy ny ray aman-dreny dia azo amidy ary afaka mahita fampahalalana bebe kokoa ianao ao amin'ny https://www.connectsafely.org/controls/ ary koa amin'ny tranokala hafa.
Mialà amin'ny Omegle ary tsidiho ny tranokalan'ny olon-dehibe raha izay no tadiavinao, ary 18 taona na mihoatra ianao.
Hiaraka hanao izany isika.Fifandraisana azo antoka na aiza na aiza misy anao
Faly izahay manampy anao hifandray, hifandray ary haneho ny hevitrao mba hahafahanao miara-miasa bebe kokoa.Faly izahay fa atokisan'ny orinasa an-tapitrisany, orinasa madinika ary olon-tsotra toa anao.
Manangana fifandraisana ara-barotra matanjaka, manamafy ny fiaraha-miasa, ary mampiantrano kaonferansa mahasarika miaraka amin'ny horonan-tsary HD sy feo ho an'ny mpandray anjara hatramin'ny 1,000.
Ampifanaraho amin'ny efitrano fivorian'ny mpiasa ny fanovana ny filan'ny mpiasa sy ny fandanjalanjana ny birao sy ny workflows lavitra miaraka amin'ny horonan-tsary HD sy feo, fifampizaràna votoaty tsy misy tariby, ary takelaka hafatra mifampiresaka.
Ampitomboy ny feonao miaraka amin'ny vahaolana amin'ny telefaona rahona iraisam-pirenena miaraka amin'ny fandefasana antso azo antoka, filaharana antso, SMS, antso ho amin'ny fihaonambe, sy ny maro hafa.
Araraoty ny fiasan'ny birao ao an-trano - fihaonambe video, antso an-telefaona, takelaka hafatra ary fanehoan-kevitra amin'ny fitaovana iarahanao manokana.
Ny vahaolana amin'ny chat dia ampidirina amin'ny kaonty ary manatsotra ny fizotran'ny asa, manatsara ny vokatra ary miantoka ny fiaraha-miasa azo antoka eo amin'ny mpiasa ao anatiny sy ivelan'ny fikambanana.
Ampitomboy sy hanatsorana ny traikefanao Zoom miaraka amin'ny fampiharana sy fampidirana mihoatra ny 1,000 ho an'ny fandaharam-potoana, fiaraha-miasa, fianarana, fandikana, CRM, sy ny maro hafa.
Zoom dia manolotra Video Webinars sy vokatra Zoom Events farany indrindra mba hanomezana fahafaham-po ny filanao hetsika virtoaly rehetra.Mamorona traikefa virtoaly izay ho tian'ny rehetra.Manomboka anio miaraka amin'ny Zoom Events sy Video Webinars.
Ampiasao ny API, SDK, webhooks, sy ny maro hafa mba hananganana rindranasa manankarena, fampidirana manokana, ary fiasa vaovao izay mameno ny rindranasa serivisy Zoom efa misy.
Fizotra an-tserasera ampiantranoin'ny mpizara izay azo amboarina mora foana sy ampitomboina amin'ny mpihaino vaovao.
Tongasoa eto amin'ny ChatSpin, fampiharana amin'ny resaka video kisendrasendra izay manamora ny fihaonana amin'ny olona vaovao amin'ny Internet.Ny ChatSpin dia manolotra fampiasa amin'ny resaka video ao anatin'izany ny saron-tava, ny sivana ny lahy sy ny vavy ary ny firenena, ny resaka manokana, ary ny maro hafa.Miresaha amin'ny olona kisendrasendra manerana izao tontolo izao avy hatrany.Manaova namana vaovao, mitadiava daty, asehoy ny talentanao, mangataha torohevitra, miresaka politika, na ankafizo fotsiny ny fifampiresahana amin'ny horonan-tsary miaraka amin'ny olona iray izay tsy mbola nihaona taminao.Maimaim-poana sy mora ny manomboka mifampiresaka amin'ny vidéo sy miala voly.Tsy fantatrao mihitsy hoe iza no hihaona aminao manaraka!
Raha mitady hifandray amin'ny olona vaovao ianao dia ny chat video kisendrasendra no lalana tokony haleha, ary ny ChatSpin no fiara hitondra anao any.Nohatsarainay ny fampiharana anay mba hahazoanao izay tadiavinao—fomba hifandraisana amin'olona vaovao.
Dia inona no andrasanao?Miresaha amin'ny olona kisendrasendra izao!
Nanomboka ny Chatspin tamin'ny iraka iray izahay—mba hanamora ny fanombohana resaka kisendrasendra amin'ny olon-tsy fantatra.
andraso.Tsy izay no tantara feno.
Tontolo iray miray kokoa, tontolo ahafahanao mifandray marina amin'ny olon-kafa, na eo an-toerana na iraisam-pirenena, no nanosika ny ekipanay hamorona fampiharana video.Ny antso tsirairay dia mampanakaiky an'izao tontolo izao, manampy antsika hahita sofina hihaino, ary manome antsika toerana hifampitadiavana hevitra.
Ny Chatspin dia manamora ny fifampiresahana amin'ny olona kisendrasendra izay mety aminao.Manaova veloma mba tsy hihaona amin'ny olona mety.Ny app chat video kisendrasendra an'i Chatspin no vavahadin-tseraseranao hahatsiaro tena mifandray amin'ny hafa, akaiky na lavitra.
Face to Face, ny endri-tsarimihetsika an-dahatsary opt-in an'i Tinder, dia miely manerana izao tontolo izao
Tinder, fampiharana mampiaraka lehibe indrindra eran-tany amin'izao fotoana izao hahitana lalao sy hifandraisana amin'izy ireo, dia manitatra endri-javatra iray hafa ankehitriny mba hanitarana ny fotoana lanin'ny olona ao amin'ny fampiharana, sy ny fifandraisana azony atao ao anatin'izany.
Face to Face, endri-javatra tsy miankina afa-tsy izay navoakan'i Tinder tamin'ny fiandohan'ity taona ity izay ahafahan'ny mpampiasa mifampiresaka amin'ny horonan-tsary tsy mifanakalo ny mombamomba azy ary rehefa miatrika ny cam ihany izy ireo, dia miitatra maneran-tany, angamba hetsika ara-potoana amin'ny fotoana tsy hihaonana mivantana ny olona maro.
Fantatr'i Tinder tsara ny lafiny mahamenatra amin'ny serivisy mampiaraka, ary noho izany dia nambarany fa tsy ny ekipan'ny vidéo an'ny orinasa fa ny ekipany Trust and Safety no nanangana ity iray ity.
"Faly izahay mizara fa ny endri-javatra Face to Face dia mivoaka amin'ny vondrom-piarahamoninay maneran-tany rehefa nahazo valiny tsara avy amin'ireo mpikambana izahay izay nahazo izany mialoha," hoy i Rory Kozoll, lehiben'ny vokatra azo antoka sy fiarovana ao amin'ny Tinder."Ity dia manampy amin'ny lisitr'ireo endri-javatra mitombo miompana amin'ny fiarovana ny mpikambana mandritra ny diany mampiaraka, toy ny Photo Verification, Safety Center ary ny teknolojia fitadiavana hafatra manafintohina.”
Ny fampiharana mampiaraka dia mety ho toy ny sokajy hafahafa hiroborobo amin'ny vanim-potoana izay ifantohan'ny maro - na noho ny fitsipiky ny governemanta, na amin'ny tolo-kevitry ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana, na izy roa - momba ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny fivorian'ny bubbles kely fantatra sy mahazatra.
Saingy raha ny marina dia toa misy fahafahana eto: lasa fomba iray ahafahan'ny olona mifandray sy mifankahita izy ireo, amin'ny fotoana izay mikatona ny trano fisotroana maro sy ny toeram-pivoriana mahazatra hafa, na farafaharatsiny mahita fa voafetra ny asany mahazatra. , ary tsy hifankahitan'ny olona fotsiny ny olona noho ny antony rehetra mety eritreretinao.
Raha ny zava-misy, Tinder, araka ny antontan'isa avy amin'ny AppAnnie, dia nitohy nitoetra tao amin'ny laharana ambony indrindra amin'ny fampidinana ny fampiharana fomba fiaina amin'ity taona ity (izay eo amin'ny laharana telo amin'ny iOS any Etazonia).
Ary ny fampiasa amin'ny resaka video dia manasongadina fotsiny ny hevitra hampiasa ny fampiharana tsy hoe hijerena hoe iza no any ivelany ary iza no mety hifanaraka aminao, fa hifandraisana amin'ireo olona ireo.
Ny tombony iray hafa eto dia ny hoe tsy spamfest maimaim-poana ho an'ny rehetra ny olona tsy tiana manatona anao, toy ny mety ho ao anaty bar.
Nomarihin'i Tinder fa mila ampidirina ao anatin'ilay endri-javatra ny roa tonta, ary tsy maintsy efa nifanaraka tamin'ny ampahany mahazatra amin'ny fampiharana ianao vao afaka natomboka ny chat.
Ary na dia izany aza dia azonao atao ny misafidy ny tsy hiraharaha ny resaka video rehefa miditra izy ireo, satria mety hiantso an-telefaona mahazatra ianao.
Ary, raha mahazo olona mampihoron-koditra ianao miteny zavatra tsy mendrika aminao ary miantso anao be loatra, ary tsy te hanova tanteraka ny endri-javatra ianao, dia azonao atao ny mitatitra ny olona amin'ny alàlan'ny fikoriana mankany amin'ny mombamomba azy ary manaraka ny torolalana "tatitra".
Tinder dia nilalao tamin'ny endri-dahatsary nandritra ny taona maro mba hanitarana ny fomba ifandraisan'ny olona amin'ny fampiharana, ny horonan-tsary dia iray amin'ireo fitaovana malaza sy mahasarika indrindra amin'ny fampiharana amin'izao fotoana izao.
Sarona mifangaro ny vokatra.Tinder Loops, fomba iray hafa hanehoana ny tenanao, dia efa nisy hatramin'ny taona 2022 ary mbola mitohy hatrany.Ny ezaka hafa toa ny Swipe Night apokalyptika amin'ny horonan-tsarimihetsika in-app dia najanona tamin'ny volana martsa noho ny Covid-19, na dia vao haingana aza dia toa miverina amin'ny tsena hafa ny fampisehoana.
Callpy dia hamela anao hahatsapa ny mety hisian'nyfifandraisana amin'ny mpitsidika ny tranokalanao.
Izany dia hiantoka ny fitomboan'ny varotra, hanatsarany fiovam-pon'ny tranokala, ary hampitombo nyfitsidihana miverimberina avy amin'ny mpitsidika.
19 andro antso maimaim-poana
Jereo ao amin'ny navigateur
Mahazoa demo 19 andro
Antso amin'ny feo
Fanaraha-maso ny fitetezana
Mahazoa fifandraisana amin'ny mpitsidika avyamin'ny loharano misokatra!
Rohy mankany amin'ny pejymedia sosialytambajotra
Pejy tranokala notsidihina
Ny angon-drakitra navelan'ny mpampiasa dia azo ampidirina ao amin'ny CRMary ampiakarina ho rakitra ihany koa
Ny fanangonana angon-drakitra mpitsidika dia atao na inona na inona fisian'ny mpanolo-tsaina.Ny fifandraisana dia hiditra ao amin'ny CRM (AMO na Megaplan) raha tsy misy ny fandraisanao anjara.
fampidirana amin'ny crm malaza
Ampio mpanjifa sy asa vaovao amin'ny CRM amin'ny dingan'ny fifanakalozan-kevitra
tsotra ny zava-drehetra
chat maimaim-poana amin'ny mpitsidika tsy misy fetran'ny asa
Chat maimaim-poana mandrakizay
Tsy misy fetran'ny asa, tsy misy fetran'ny fotoana
Tsara kokoa noho ny mpifaninana amintsika isika
27 asa maimaim-poana
27 fitaovana fanaraha-maso ny kalitaon'ny serivisy
Manome fanomezana izahay ho an'ny fanondroana namana
Manomboka amin'ny 215 ₽ isaky ny toeram-piasana consultant isam-bolana
Fantsona fifandraisana 3 fanampiny
Chat, feo, horonan-tsary, fanaraha-maso ny hetsika
Fanamafisana ny fanaraha-maso, fifandraisana amin'ny feo/video
19 andro fitomboan'ny varotra, asa 20
FILAZANA SY FAHATSOHANA NY FASA SY FITAOVANA
Ny fomba nentim-paharazanaamin'ny torohevitra an-tserasera
Antso an-tserasera maimaim-poanaavy amin'ny mpitsidika
Manaovafifampidinihana video mivantana amin'ny tranokala
Adikao amin'ny alalan'nypejy ny mpitsidika, asehoy nyvotoatiny
Arahony hetsika ataon'ny mpitsidika amin'nyfotoana tena izy
Asongadino sy soraty nysinga ao amin'ny pejin'nympitsidika
Callpy dia hanolotra fanampiana ho azy ho an'nympitsidikaleo
Fanamboarana lalina ny fombawidget miaraka amin'ny singamaha-orinasa
Tehirizoho azy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ao amin'ny CRM
Fanangonana fifandraisanaamin'ny mpitsidika tranokalaamin'ny alàlan'ny endrika Callpy
Mamorona vondrona mpanolo-tsainaZarao amin'izy ireo nympitsidika
Midira ao amin'ny chat video Rosiana malaza indrindra amin'ny fampiarahana, ny fiarahana na ny fotoana mahafinaritra hifandraisana amin'ireo namana vaovao sy namana taloha ao amin'ny tambajotra. Isan'andro ny World Wide Web dia mahazo laza ary manolotra fomba vaovao sy mahaliana hifandraisana amin'ny Internet avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, miaraka amin'ny fanampian'ny chat video sy ny serivisy tranonkala hafa mora sy mora mifankahita amin'ny olona mahaliana, fa tsy amin'ny fifandraisana fotsiny. Ny chat video tany am-boalohany ho an'ny fifandraisana sy ny fampiarahana Web camera chatroulette-worldwide.com fifandraisana manerana izao tontolo izao amin'ny aterineto. Satria ny antontan'isa dia betsaka kokoa ny tanora (vehivavy sy lehilahy) mahita ny antsasany amin'ny alàlan'ny fampiarahana amin'ny horonan-tsary amin'ny chat video nefa tsy mivoaka ny efitrano! Ny fahombiazan'ny loharanon-karena.
Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana amin'ny chat-ruletka.net tsotra, noho ny lafiny webcam afa-tsy ny fifandraisana dia afaka mifanakalo maso satria zava-dehibe ny fijerena ny tapany faharoa. Nahazo laza be dia be ny chat noho ny mety hahitana namana amin'ny filaharana kisendrasendra tanteraka ny fomba filalaovana manodinkodina ny tavoahangy, avy aiza, ary nahazo ny anarana mahazatra ny chat roulette. Soso-kevitra sy tetika Aoka ho tso-po amin'ny tenany satria rehefa mihaona amin'ny tena fiainana miaraka amin'ny namana vaovao amin'ny chat video dia te hahita olona tena izy fa tsy mpilalao foronina amin'ny chat video. Mifandraisa, mahita namana, namana taloha, miezaka ny hanao ny fifanakalozan-kevitra amin`ny olona ao amin`ny rivo-piainana mahafinaritra, misoroka ny teny ratsy, mihazona ny resaka mahaliana sy mahafinaritra - no fanalahidin`ny fahombiazana mampiaraka! Manaova fiderana, manomeza fanomezana! toy ny amin’ny tena fiainana,fanomezam-pahasoavana dia omena mba hahatakatra ny mpiantso fa ny saina feno fanoloran-tena sy misongadina manohitra anao eo amin`ny namana sy ny namana. Fitsipika russian video chat coomeet memeet dia manolotra resaka serivisy amin'ny fomba tsara. Ny resadresaka amin'ny chat dia mpampiasa miteny Rosiana ny ankamaroany.
Voarara mafy tsy etika, tsy sivana ny fanehoan-kevitra amin'ny endriny rehetra.Izany resaka momba ny firaisana ara-nofo amin'ny zaza tsy ampy taona hatramin'ny 18 taona.Voarara ny mampiseho ny firafitry ny tena.fiarovana Ho an'ny fiarovana amin'ny chat video dia mampihena ny isan'ny olona tsy manara-penitra Fanapahan-kevitra momba ny fisoratana anarana tsotra izay tsy ho sarotra fa hanampy ny sivana amin'ny chat sy ny fanakanana ny mpitsoka.
Sites chat tsara indrindra toa ny omegle tamin'ny taona 2022 – Alternatives amin'ny chat ho an'ny chat video maimaim-poana
Mampiasa Internet izahay amin'ny asa maro samihafa, saingy ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra dia ny fiaraha-monina.Ny filàna fifandraisana dia toetry ny olombelona izay mitondra fampiononana sy fahafaham-po ho an'ny ankamaroan'ny olona mahazatra.Izany no mahatonga ny Facebook ho malaza.
Saingy misy tranonkala maro hafa ahafahan'ny olona mihaona.Maro amin'ireo no antsoina hoe forum na message board izay misy olona mametraka fanehoan-kevitra ary avy eo miverina mijery raha misy namaly.Na izany aza, misy tranonkala maro manamora ny fifampizaràna amin'ny fotoana tena izy izay akaiky ny resaka manokana toy ny ahafahanao mifandray amin'ny Internet.
Ny iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra dia antsoina hoe Omegle, izay ifanakalozan'ny mpikambana amin'ny alalan'ny horonan-tsary, feo, na lahatsoratra fotsiny.Toerana tsara hihaonana amin'ny olona kisendrasendra ary hanao resaka amin'ny olon-tsy fantatra.Saingy tahaka ny ankamaroan'ny tranokala lehibe, Omegle dia lasa be mponina.
Eto ambany ianao dia hahita efitra firesahana mivantana toa ny Omegle izay ahafahanao mifandray amin'ny namana vaovao.
1. Chatliv:Chatliv - Ny fomba haingana sy mora indrindra hanaovana chat amin'ny webcam miaraka amin'ny olon-tsy fantatra na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.Ny hany ilainao atao dia ny miditra ny maha-lahy na maha-vavy ny olona, ​​izay ny serivisy dia hifidy avy hatrany ny vahiny sahaza indrindra izay te hihaona amin'ny olona toa anao ihany koa.
Chatliv no tranonkala chat video tsara indrindra ary iray amin'ireo tranonkala chat video malaza indrindra.An'arivony ny chatter an-tserasera foana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny chat room an-tserasera.
2. CooMeet:Coomeet dia lahatsary amin'ny teny rosiana amin'ny chat sy tranonkala mampiaraka (roulette).iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny chatroulette sy omegle, ao amin'ny coomeet dia afaka manomboka video mampiaraka kisendrasendra vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.Coomeet dia miasa amin'ny fitsipiky ny roulette, izay midika fa tsy fantatrao mihitsy hoe iza no hifampiresahanao.raha leo ianao dia mety hitondra fientanentanana ho anao ireo karazana chat ireo.
Endri-javatra ao amin'ny Coomeet:1. Mifandraisa amin'ny olon-tsy fantatra foana2. Miresaka video maimaim -poana3. Manampia olona hafahafa ao amin'ny lisitry ny namanao4. Mifandraisa amin'ny olon-tsy fantatra tianao5. Mandefasa fanomezana sy raozy ho an'ny olon-tianao6. Mitadiava ny namana tsara indrindra
3. TinyChat:Androany, TinyChat no lehibe indrindra amin'ny serivisy amin'ny resaka feo sy video amin'ny Internet.Ny orinasa dia mirehareha fa ny mpampiasa dia mamokatra 5 tapitrisa minitra amin'ny ora fandefasana isan'andro.Any ianao dia hahita chat an'arivony, eny fa na ny sasany aza dia natomboky ny olona ao amin'ny faritra misy anao, ary raha tsy hitanao ny lohahevitra tianao dia azonao atao ny mamorona anao manokana.
TinyChat dia mamela horonan-tsary hatramin'ny 12 isaky ny efitrano ary mampiasa API iray ahafahan'ny mpampiasa mandefa horonan-tsary mivantana avy amin'ny fampisehoana nampiantrano ny serivisy ary tsy mendrika izany.Mivondrona ny olona mba hifampiresaka amin'ny alalan'ny mikrô, horonan-tsary na hafatra avy hatrany.
4. Omegle Webcam:Omegle Webcam no Webcam mampiaraka sy mifampiresaka malaza indrindra. Mihoatra ny 20.000.000 ny mpampiasa voasoratra anarana. Chat Roulette maimaim-poana. tranokala toy ny omegle.Omegle Webcam dia safidy maimaim-poana amin'ny chat video kisendrasendra Omegle, miresaka amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny alàlan'ny webcam ary mihaona olona vaovao avy hatrany. Video chat amin'ny mpampiasa kisendrasendra, manaova namana vaovao. Manaova fifandraisana ara-tsosialy amin'ireo tia omegle.Omegle.webcam dia karazana tranokala chatroulette.
5. Bazoocam:Bazoocam dia vohikala fifampiresahana amin'ny Internet tsy dia misy dikany loatra mba hitazonana azy ho madio.Tahaka ny sasany amin'ireo tranonkala hafa voalaza, nidona tsy nahy tamin'ny olon-kafa ianao.Raha tsy tianao ny zavatra hitanao dia tsindrio ny bokotra "Skip" ary mifindra amin'ny olona hafa.
Bazoocam dia manolotra lalao marobe marobe azonao idirana ho mpanapaka ranomandry na raha leo miresaka momba ny tenanao ianao.Raha leo ianao dia manolotra zavatra tsy mahazatra izy ireo, fa mampitandrina anao amin'ny fitazonana ny akanjonao.Andramo manao akanjo na milalao mozika tianao indrindra.Heck, mitendry gitara na kazoo dia hahita olona maro hiresahana ianao.
6. FaceFlow:FaceFlow - Mampiakatra ny haino aman-jery sosialy ho amin'ny ambaratonga manaraka ireto ry zalahy ireto amin'ny alàlan'ny famelana ireo mpampiasa hanana resaka video izay mahazaka olona telo isaky ny mandeha.FaceFlow dia manolotra "chat video maimaim-poana sy fihaonambe video miaraka amin'ny namana, eo amin'ny navigateur web anao", fa afaka miresaka amin'ny olon-tsy fantatra ihany koa ianao.Afaka mamorona mombamomba azo karohina izao ny mpampiasa ary afaka mizara sary sy horonan-tsary ankafiziny ao amin'ny YouTube.
Ankoatra ny serivisy amin'ny chat web hafa, ity tranokala ity dia mifanaraka kokoa amin'ny serivisy lehibe atolotry ny Skype.Manolotra resaka an-tsoratra sy video indray mandeha izy io.Ary mba hahaliana kokoa ny zava-drehetra, namoaka lalao marobe antsoina hoe Flappy i FaceFlow izay toa henjana.
7. ChatRandom:Manana tanjona lehibe ny Chatrandom, ny iray amin'izany dia ny hitovy anarana amin'ny Facebook, Twitter na YouTube.Ity dia tranonkala webcam iray hafa mampifandray mpampiasa iray amin'ny mpampiasa kisendrasendra hafa.Niseho ho solon'ny Chatroulette izy io satria nanova matetika ny fitsipika ny tranokala.
Mba hanatratrarana io tanjona io dia mampivondrona olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izy ireo ary manampy firenena sy fiteny vaovao tsy tapaka.Azonao atao ny misafidy ny hifanerasera amin'ny olon-kafa, miaraka amin'ny vondrona, na amin'ny ankizivavy.Azonao atao ihany koa ny misafidy izay tianao hitenenana amin'ny alàlan'ny horonan-tsary, miaraka amin'ireo mpampiasa pelaka, na amin'ny fiteny manokana.Manampy webcam fanampiny sy serivisy hafa koa izy ireo mba hamenoana ny andrasan'ny mpampiasa.
8. Chatroulette:Chatroulette dia serivisy chat mifototra amin'ny webcam izay manana fomba fiasa tokana hampifandraisana ireo mpampiasa amin'ny olon-tsy fantatra.Tokony ho toy ny milalao roulette rosiana izany, fa raha tokony hiady amin'ny basy ianao, dia mijanona am-bava amin'ny alàlan'ny hafatra soratana sy/na webcam, ary raha miteny na manao zavatra tsy tian'ny olon-tianao ianao dia miala amin'ny chat ("vono") resaka).
Izy io dia noforonin'ny zaza 17 taona iray izay nitondra ilay tranokala avy tao amin'ny efitranony ho any an-tranon'ny ray aman-dreniny.Na dia tsy nisy doka aza dia nitombo be tamin'ny vava ity tranokala ity.Taorian'ny fitsapana sy ny fahadisoana nandritra ny taona maro, dia tonga tamin'ny toerana ahafahany manivana tsara ny fitondran-tena tsy mendrika izy.
Ny mpampiasa dia tsy maintsy misoratra anarana ary manaiky ny fepetran'ny serivisy, ary ireo mpandika lalàna dia hosivan'ny mpandrindra ny tranokala. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia latsaky ny 30 taona ary maro kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy. Farafaharatsiny R naoty.
Fitsipika momba ny fihaonana amin'ny olon-tsy fantatra amin'ny Internet1. Aza manao na miteny izay azonao itarainana any aoriana. Ny chat, lahatsoratra, feo na horonan-tsary dia mora voarakitra ary ampiasaina hanohitra anao.2. Raha iharan'ny herisetra ianao dia tatero ary lisitra mainty ny mpampiasa.Ataovy toy izany koa raha mahita olona ampijaliana ianao.3. Aza mizara ny mombamomba anao manokana amin'iza na iza.4. Ireo mpisoloky matihanina dia handroaka ny mombamomba anao.5. Aza mamela na inona na inona manokana ao amin'ny frame chat video, toy ny sarin'ny fianakaviana na antsipiriany hafa azon'ny olona ampiasaina hanaraha-maso.6. Ampianaro ny fianakavianao ny fomba hiarovana ny tenanao rehefa mampiasa ny iray amin'ireo serivisy ireo.Na dia efa tony aza ny ankamaroan'izy ireo, dia mbola misy mpiremby marani-tsaina any.7. Mifalia... izany no izy.